China အန္တရာယ်ရှိသောဖုန်းအားသွင်းစက်များနှင့်ထုတ်လုပ်သူများသတိပြုပါ APS
Fast Charger အတွက် Pcba
Custom PCBA နှင့် Custom Quick charger
အန္တရာယ်ရှိသည့်ဖုန်း chargers များကိုသတိပြုပါ
ငါတို့ရှိသမျှသည်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။ သင်ထွက်နေပြီ၊ သင့်ဖုန်းကအားနည်းနေတယ်ဆိုတာကိုသိတယ် သငျသညျခရီးသွားတဲ့အခါအထူးသဖြင့်ဘုံပါပဲ။ လေဆိပ်စောင့်ဆိုင်းနေသည့်ဒေသများတွင်ဆိုင်ခွဲများနှင့်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်များပတ်ပတ်လည်ရှိခြေသလုံးအိမ်များရှိသည်။
ကံမကောင်းစွာဖြင့်“ jacking jack” ဟုခေါ်သည့်လိမ်လည်မှုသည်သင်၏ဖုန်းသို့မဟုတ်တက်ဘလက်ကိုအားသွင်းရန်အန္တရာယ်ရှိစေသည်။ Juice jacking သည် USB port များသို့မဟုတ်ကေဘယ်များ malware ကူးစက်ခံရသောအခါဖြစ်တတ်သည်။ သငျသညျကူးစက် cable ကိုသို့မဟုတ် port သို့ plug တဲ့အခါ, လိမ်လည်သူများ၌ရှိကြ၏။ ကွဲပြားခြားနားသော2ခြိမ်းခြောက်မှုအမျိုးအစားများရှိပါတယ်။ တစ်ခုမှာဒေတာခိုးယူခြင်းဖြစ်သည်။ သငျသညျအကျင့်ပျက် port သို့မဟုတ် cable ကိုသို့ plug နှင့်သင်၏စကားဝှက်သို့မဟုတ်အခြားဒေတာခိုးယူနိုင်ပါတယ်။ ဒုတိယမှာ malware တပ်ဆင်ခြင်းဖြစ်သည်။ သင်သည်ဆိပ်ကမ်းသို့မဟုတ်ကေဘယ်လ်နှင့်ဆက်သွယ်ပါကသင်၏ကိရိယာပေါ်တွင် malware ထည့်သွင်းထားသည်။ သင်ဖြုတ်ပြီးသည့်တိုင်၊ သင်ဖယ်ရှားသည့်တိုင်အောင် malware သည်စက်ပေါ်တွင်ရှိနေလိမ့်မည်။
ယခုအချိန်ထိဖျော်ရည်ဖျန်းခြင်းသည်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်လေ့ကျင့်ပုံမပေါ်ပါ။ Wall of Sheep hacking အဖွဲ့ကဖြစ်နိုင်ခြေရှိကြောင်းသက်သေပြခဲ့သည်၊ ထို့ကြောင့်အများပြည်သူသတိထားသင့်သည်။ အထူးသဖြင့် USB ကြိုးများသည်အန္တရာယ်ကင်းသည်။
1. သင် Wall Charger ခြင်းနှင့် car chargers with you when you’re traveling.
ဖုန်းအားနည်းသည့်အချိန်တွင် Wall Chargers မဟုတ်ဘဲ USB Charging များအသုံးပြုပါ။
သယ်ဆောင်ရလွယ်သောဘက်ထရီအရန်တွင်ပါ ၀ င်ပြီးအရေးပေါ်အခြေအနေတွင်အားသွင်းပါ။
၅။ သင်၏ကိရိယာများပေါ် Malwarebytes ကဲ့သို့သော anti-malware အက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုရှိပြီးပုံမှန်စကင်ဖတ်စစ်ဆေးမှုကိုပြုလုပ်ပါ။
မိုဘိုင်းအားသွင်းကိရိယာ , Fast တာဝန်ခံ Pcb Desgin , မြန်တာဝန်ခံမော်တော်ကားအားသွင်းကိရိယာ Cable ကိုအတူ , Desgined Usb Charger , Plug Adatpter Pcba , USB Adapter ကို ၊